PSG.LGD နဲ့ EHOME တို့ရဲ့ Dota2 လူစာရင်း အပြောင်းအလဲ – Gaming Noodle
PSG.LGD နဲ့ EHOME တို့ရဲ့ Dota2 လူစာရင်း အပြောင်းအလဲ
မနေ့က ကြေညာခဲ့တဲ့ Vici Gaming ရဲ့ 2020-2021 အတွက် လူစာရင်း ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် တရုတ် Dota2 ကစားသမား အပြောင်းအရွေ့ကတော့ ခပ်ကြမ်ကြမ်း ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ။
VG Gaming သတင်းအပြီးမှာ လူစာရင်းအသစ်ကို ကြေညာခဲ့တာကတော့ PSG.LGD အသင်းပါ။ fy နဲ့ Maybe တို့ ထွက်ခွာပြီးတဲ့နောက် ကျန်ရှိနေတဲ့ old eLeVeN, Chalice နဲ့ xNova တို့နဲ့ပါ လမ်းခွဲခဲ့ပြီး တစ်သင်းလုံး ရုံခါခဲ့ပါတယ်။
PSG.LGD အသင်းသစ်မှာ ပထမဆုံး ပါဝင်လာတဲ့ ကစားသမားကတော့ အရင်ကစားသမားဟောင်းလည်းဖြစ် လက်ရှိ CDEC မှာလည်း ကစားနေတဲ့ “Ame” ပါ။ Ame အပြင် နောက်ထပ် ခေါ်ယူလိုက်တာကတော့ EHOME တစ်သင်းလုံး နီးနီးပါပဲ။
EHOME ရဲ့ လက်ရှိ Carry “Sylar” ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ (၄) ယောက်ဖြစ်တဲ့ NothingToSay, Faith_bian, XinQ, y’ တို့အပြင် လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ နည်းပြဖြစ်တဲ့ “Xiao8” (Director 😎 ကြီးကိုပါ ခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ (Sylar ကတော့ Competitive Scene ကနေ ခေတ္တ အနားယူနေတယ်လို့ သိရပါတယ်)။ NothingToSay နဲ့ XinQ တို့က EHOME ကနေ အဌားနဲ့ ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ အပြီး ပြောင်းရွှေ့လာကြတာပါ။
PSG.LGD ရဲ့ လူစာရင်းသစ်ကတော့
6. Xiao8 (Coach) တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
တရုတ် အင်အားကြီး အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ PSG.LGD ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ အရင် Carry “Ame” နဲ့ Wing ကစားသမားဟောင်း (၂) ယောက်ဖြစ်တဲ့ Faith_bian နဲ့ y’ တို့ပါ ရောက်ရှိလာပြီး သူတို့ကို နည်းပြမယ့်သူက Xiao8 ဖြစ်နေတဲ့အတွက် သတင်းကောင်းလို့သာ ထင်မြင်မိပါတယ်။
PSG.LGD က သင်းလုံးကျွတ် စျေးဝယ်ထွက်သွားတဲ့အတွက် အခွံပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ EHOME ကလည်း လူစာရင်းအသစ်ကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
PSG.LGD ရဲ့ ကစားသမားဟောင်း ၂ ယောက်ဖြစ်တဲ့ Chalice နဲ့ xNova ကို ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Chalice ကတော့ သူအံမဝင်ခဲ့တဲ့ Carry Role မဟုတ်ပဲ အရင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Offlane Role ကို ပြန်ဆော့မှာပါ။ ထို့အပြင် PSG.LGD နည်းပြ “Yao” ကလည်း EHOME ကို ရောက်ရှိလာမှာပါ။
CDEC Gaming ကစားသမားဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ “Xm” နဲ့ “James” တို့က Carry Role နဲ့ Semi-support role နေရာတွေအတွက် အသီးသီး ရောက်ရှိလာမယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ EHOME ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားအကောင်းဆုံး အပြောင်းအရွေ့ကတော့ Carry ကစားသမား နေရာအတွက်ပါ။
ခေတ္တ အနားယူသွားတဲ့ “Sylar” ရဲ့နေရာမှာ အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ Newbee နဲ့ Team Aster ကစားသမားဟောင်း “Sccc” ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Sccc ကတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရှိပြီးသား Carry တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် DPC Season ရဲ့ နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ StarLadder ImbaTV Dota2 Minor ပွဲမှာပါ Team Aster နဲ့ ချန်ပီယံဆုကို ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။
6. Yao (Coach) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
TI နဲ့ ဝေးကွာနေပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ် Dota2 အသင်းတွေကတော့ မကြောက်မရွံပဲ အပြောင်းအလဲတွေကို ရဲရဲတင်းတင်း ပြုလုပ်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ တရုတ်အသင်းကြီး တော်တော်များများက လူစာရင်းကို မြေလှန်ခဲ့ကြပေမယ့် Invictus Gaming (IG) ကတော့ မနှစ်က လူစာရင်းကိုပဲ အပြောင်းအလဲမလုပ်ဘူးလို့ ကြေညာထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမရှိပေမယ့်လည်း လူစာရင်းအသစ်တွေနဲ့ ပွဲထွက်လာကြမယ့် တရုတ်ပြည်တွင်း Dota2 ပြိုင်ပွဲတွေကတော့ ပြန်လည် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာတော့မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။